DAAWO: Nin ayaa lagu qasbay inuu guursado gabar uu sheegay inaysan uqalmin, ilintii oo ka dhamaatay | Calafka.net	Friday, April 25th, 2014	Home
DAAWO: Nin ayaa lagu qasbay inuu guursado gabar uu sheegay inaysan uqalmin, ilintii oo ka dhamaatay
Dec 10, 2012 - 1 Jawaab	ShareGobolo ku yaala dalka India waxaa ka jira dhaqamo xun xun oo fircooni ah kuwaas oo inta badan ka yaabsada shacab weeynaha Caalamka. Gobolada dalka India qaarkood Raga ayaa waxa ay ka qaali san yihiin Dumarka waxaana dhacda mararka qaar in Dumarka loo doono Raga ay jeclaadaan .
Diimaha kala duwan ee Dunida ka jira intooda badan Raga ayaa marka ay Dumarka jeclaadaan ama is af gartaan waxaa loo doonaa Haweenka balse ma dhacdo in Dumarku xoog ku doontaan ama ku guursadaan Raga.
Dalka India Wiil ayaa si xoog ama qasab ah waxaa loogu daray Gabar uu aad u diidanaa in uu Guursado waxaana Wiilkaan garbaha ka hayay oo qasbayay qooyskiisa kuwaas oo Wiilkii iyo Gabadhii iskugu keenay meel Fagaaro ah oo dad fara badan ay ku sugnaayeen .
fodcade says:	December 10, 2012 at 8:43 pm	Asc waa layaaaabka adunka waxkadaran ayaa la arkaa wanamahasantihi